Potential is Learning Agility ( Part-2) ﻿
Potential is Learning Agility ( Part-2)
Tags: potential-learning agility-career-knowledge
How to develop the learning agility?
အပိုင်း ( ၁) မှာတော့ Learning Agility ( ၅) မျိုးကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး အပိုင်း ( ၂) မှာတော့ Learning Agility တိုးတက်အောင် လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးထားပါတယ်။
Learning Agility ကို develop ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်လေးကတော့
4. Plan တို့ဖြစ်ပြီး ၄င်းနှင့်ပက်သက်သည့် အရာတွေကို Life Experience နှင့် Working Experiences မှာ အခြေခံပြီး ဥပမာ လေးတွေပေးပြီး ဆွေးနွေးပေးထားပါထားသလို Learning Agility ကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ Open Minded ရှိဖို့လည်း လိုတယ်ဆိုတာကို ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ အခု sharing လုပ်ပေးတာတွေကို လက်တွေ့မှာ အသုံးချဖို့ အသေးစိတ်ကို Audio မှာ ဆက်လက်နားထောင်လိုက်ပါအုံးနော်။
အခု Learning Agility နဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြည့်ပြည့်စုံဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့ Myanmar Awba Group မှ Group Performance Development Director မရီမွန် ကို JobsInYangon.Com မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။